Talaado 28 Bisha Sagaalaad 2021
Roob Roobaadka Roob-roobaadka waa isku darka jaakad roobaadka, dallad iyo surwaal biyuhu biyuhu ka hortagaan. Iyada oo ku xidhan xaaladaha cimilada iyo xaddiga roobka waxaa lagu hagaajin karaa heerar difaac oo kala duwan. Muuqaalkiisa gaarka ah ayaa ah inay ku darto roobaadka iyo dalladda hal shay. Marka loo yaqaan 'roobaadka roobaadka' gacmahaagu waa bilaash. Sidoo kale, waxay ku fiicnaan kartaa howlaha isboortiga sida fuulista baaskiil. Intaa waxaa dheer waddo dadku buuq badan kuguma dhacaan marka dalladdu ay fidsan tahay garbahaaga.
Isniin 27 Bisha Sagaalaad 2021
Giraantu Tani waa dahab qurux badan oo dabiici ah oo dabiici ah. "Doppio", oo qaabkiisa kala jajaban ayaa ku safraya laba jiho oo tilmaamaya waqtiga ragga: noloshooda iyo mustaqbalkooda. Waxay xambaarsan tahay lacagta iyo dahabka oo matalaya horumarka wanaagga ruuxda aadamiga oo dhan taariikhdiisa Dunida.
Giraan Iyo Pendant
Axad 26 Bisha Sagaalaad 2021
Giraan Iyo Pendant Ururinta Quruxda dabiiciga ah waxaa loo abuuray inay tahay qadarin kaymaha Amazon, dhaxalka kaliya ma ahan Brazil, laakiin adduunka oo dhan. Ururintani waxay isu keentaa quruxda dabeecadda iyada oo dareen ahaan loo qabo qalloocyo dheddig ah halkaas oo ay qaab-dhismeedka dahabku qurxiyaan kuna xardhaan jirka dumarka.
Sabti 25 Bisha Sagaalaad 2021
Jimco 24 Bisha Sagaalaad 2021
Khamiis 23 Bisha Sagaalaad 2021
Roob Roobaadka Giraantu Giraan Iyo Pendant Silsiladdu Silk Foulard Ururinta Dahabka